Nitsirara tamin’ny tany, nisarona lamba fotsy: mpifankatia niara-maty tao an-tranony | NewsMada
Nitsirara tamin’ny tany, nisarona lamba fotsy: mpifankatia niara-maty tao an-tranony
Par Taratra sur 19/06/2020
Hatairana ny an’ireo mponina eny Antsahameva, afakomaly tolakandro raha nahita ny nofo mangatsiakan’ireo mpifantia maty efa elaela ka namofona teny amin’ny manodidina. Tsy nahitana ratra ny vatany ary tsy fantatra ny antony nahafaty azy ireo.
Misokatra ny fanadihadiana mahakasika ny fahafatesan’ireto mpifankatia hita tao amin’ny trano fonenany etsy Antsahameva Ankatso, afakomaly tolakandro. Hatreto, tsy mbola fantatra ny antony nahafaty azy ireo, mbola andrasana ihany koa ny valin’ny fizahana ataon’ny mpitsabon. Hivaly anio izany, hoy ny tompon’andraikitra iray ao amin’ny tranom-patin’ny HJRA.
Hatramin’ny ora nanoratanay farany, mbola ao amin’ny tranom-patin’ny hopitaly ny nofo mangatsiakan’izy ireo. Mbola tsy nalain’ireo fianakaviany na efa nampandre ny zava-nisy aza ny polisy.
« Tamin’ny alarobia teo, naheno fofona izahay mpiray tanàna. Avy eo nanontany ny tompon-trano sao avy ao ambadika, namaly anefa izy ireo fa tsy avy ao », hoy ny fanazavan’ny mponina eny an-toerana. Notohizany tamin’izany fa ilay efitra nisy an’ireo mpifankatia ireo sisa no tsy nanontanian’izy ireo. Heno tamin’izany fa avy tao amin’izy ireo ilay fofona ka niantsoana vavolombelona avy hatrany. Nantsoina ihany koa ireo polisy.
« Tsy nisy ratra… »
Tonga teny an-toerana ireo mpitandro filaminana, ny harivan’izay, manodidina ny tamin’ny 5 ora teo ary niditra tao amin’ilay efitra nisy ireo mpanofa trano. « Tsy naratra ry zareo fa nofo mangatsiaka mitsirara sy misarom-damba fotsiny no hitanay », hoy ny fanazavan’ireo polisy.
Nanomboka ny asabotsy hariva teo, tsy nandrenesam-baovao intsony izy ireo. Fantatra fa vao 28 taona ilay lehilahy ary manodidina ny 20 taona kosa ilay vehivavy.